သတ္တုတူးဖော်ရေးမီးဖိုများအတွက်မြေမှုန့်စုဆောင်း China Manufacturer
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: သတ္တုတွင်းအရည်ကျိုမီးဖိုများအတွက်ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး,မြင့်မားသောစွမ်းရည်မိုင်းအပူပေးစက်ဖုန်ကောက်ခံရေး,Ore အပူမီးဖိုထဲကဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး
Home > ထုတ်ကုန်များ > လူပျိုစက်ဖုန်ကောက်ခံရေး > သတ္တုတူးဖော်ရေးမီးဖိုများအတွက်မြေမှုန့်စုဆောင်း
submerged arc မီးဖိုများအတွက်ကြီးမားသောသွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကိုတစ်စီးရီးမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကြာမြင့်စွာအိတ် filter ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သောအုပ်စုခွဲအခန်းထဲကပြန်မှုတ်ခြင်းနှင့်သွေးခုန်နှုန်းကိုပြန်မှုတ်အခနျးမြား၏အနိမ့်အစွမ်းသတ္တိ၏ချို့ယွင်းချက်အောင်မြင်သောအရာမှုတ်, တစ်ချိန်တည်းမှာဖုန်မှုန့်နှင့် filtration မှုတ်ဟာသွေးခုန်နှုန်းမှုတ်များနှင့်ပြာမှုန်အဖြစ်ဖုန်မှုန့် remover အမျိုးမျိုးတို့ကို၏အားသာချက်များကိုပေါင်းစပ်။ ဒါဟာဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေး၏သေးငယ်တဲ့ဧရိယာ, တည်ငြိမ်စစ်ဆင်ရေး, တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, filter ကိုအိတ်၏ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုဘဝမြင့်မားထိရောက်မှုနှင့်ရှုထောင်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်နိုင်အောင်အပေါ်ထိုကဲ့သို့သောဘိလပ်မြေလညျးမီးဖိုခေါင်းကိုလညျးမီးဖို, သံနှင့်သံမဏိအဖြစ်အကြီးစား dedusting ပစ္စည်းကိရိယာများ, လျှပ်စစ်ပါဝါနှင့်အသုံးပြုသည်။
1. ပြာ pulsing နှင့်မှုတ်၏နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ မြင့်မားသောပြာမှုန်ဖယ်ရှားရေးစွမ်းရည်မြင့်မားဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးထိရောက်မှု, အနိမ့်ထုတ်လွှတ်အာရုံစူးစိုက်မှု, အသေးစားလေကြောင်းယိုစိမ့်မှုနှုန်းနည်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသံမဏိစားသုံးမှုနည်းကြမ်းပြင်အာကာသ, တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေး, ကောင်းသောစီးပွားရေးပြန်။ ဒါဟာသတ္တုဗေဒအတွက် flue ဓာတ်ငွေ့ dedusting, အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, စက်ပစ္စည်း, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, ပါဝါစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အလင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်သင့်လျော်သည်။
အဆိုပါ 2. သေတ္တာလုံ, ကောင်းသောတံဆိပ်ခတ်စွမ်းဆောင်ရည်, စစ်ဆေးရေးတံခါးသည်ကောင်းသောတံဆိပ်ခတ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ရေနံဆီနှင့်အတူယိုစိမ့်ထောက်လှမ်းနှင့်အနိမ့်ယိုစိမ့်မှုနှုန်းနှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
3. ဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်ပြွန် layout ကိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည်နှင့် Airflow ခုခံသေးငယ်သည်။
4. သီးခြားအခန်းကိုလေကြောင်းပေါက်ကွဲမှုသွေးခုန်နှုန်းပြာသန့်ရှင်းရေး, ရှည်လျားပြာဖယ်ရှားရေးသံသရာ, အနိမ့်စားသုံးမှု၏အသုံးပြုမှု, filter ကိုအိတ်နှင့်အဆို့ရှင်၏အသက်တာကိုနှစ်ဆနိုင်ပါတယ်။
5. ဒါကြောင့်စက်ရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သည်ကို၎င်း, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိရိယာ၏ပုံမှန်လည်ပတ်အကျိုးသက်ရောက်စေမည်မဟုတ်။
DMC စီးရီးသွေးခုန်နှုန်းတစ်ခုတည်းစက်ဖုန်မှုန့် remover အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Related Products List: သတ္တုတွင်းအရည်ကျိုမီးဖိုများအတွက်ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး , မြင့်မားသောစွမ်းရည်မိုင်းအပူပေးစက်ဖုန်ကောက်ခံရေး , Ore အပူမီးဖိုထဲကဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး , ဆေးရွက်ကြီးများအတွက်ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး , မိုင်းနယ်များအတွက်ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး , လျှပ်စစ်အရည်ကျိုမီးဖိုများအတွက်မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေး , ပေါက်ကွဲမှုအရည်ကျိုမီးဖိုဂတ်စ်ဖုန်မှုန့်အိတ် , ဖြူလညျးမီးဖို၏ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး